पुरानो ल्यापटप लामो समयसम्म चलाउन अपनाउनुहोस् यी ६ स्मार्ट टिप्स – Esewanews
Home / blog / पुरानो ल्यापटप लामो समयसम्म चलाउन अपनाउनुहोस् यी ६ स्मार्ट टिप्स
Shivaram Khadka blog, Headline, विचार, समाचार Leaveacomment 13248 Views
त्यो एप डाउनलोड भइसकेपछि त्यसलाई लन्च गर्नुहोस् र कृएट इन्स्टलेसन मिडिया फर अनोदर पीसी सेलेक्ट गर्नुहोस् । यो एपले तपाईंको अपरेटिङ रिफ्रेसको लागि इन्स्टल प्याकेज कृएट गर्न फर्वाड प्रोम्प्ट दिन्छ ।
यो तयार भइसकेपछि फाइल एक्स्प्लोरर ओपन गरी इन्स्टलेसन मिडिया सहित ड्राइभ सेलेक्ट गर्नुहोस् । सेटअप. एक्सला२ डबल क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि विण्डोज रिइन्स्टल गर्न विभिन्न अप्सनहरु आउँछन् । त्यहाँ तपाईंले इन्स्टल प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि विभिन्न अप्सनहरु सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ ।
यसले ह्याण्डल गर्न सक्छ भने तपाईंको पुरानो भर्सनमा भएको एपलाई केही नयाँ, ताजा र राम्रा एपले विस्थापन गरिदिन्छ ।
ब्याकग्राउण्डमा रन हुन अनुमति पाएका एपहरु ब्याट्री युसेज स्क्रीनमा देखापर्छन् । ती एपहरुले तपाईंको पुरानो ल्यापटपको ब्याट्री खाएको छैन भने पनि तपाईंले त्यसलाई डिसेबल गर्नसक्नुहुन्छ ।
ल्यापटप तात्दा के गर्ने ?
अहिलेको समयमा अध्ययनदेखि कार्यालयको कामका लागि ल्यापटपको निकै प्रयोग भइरहेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण थुप्रै मानिसहरुले घरबाटै अफिसको काम गरिरहेका छन् ।
यस्तोमा ल्यापटप धेरै जसो समय अन भएर बस्छ र तात्ने समस्या देखिन थाल्छ । लामो समय काम गर्दा त झन् अत्याउने गरेरै ल्यापटप गरम भइरहेको हुन्छ ।
त्यसो त कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइस प्रयोग गर्दा अलिकति त तात्नु स्वभाविक नै हो । तर निकै तात्ने अवस्थामा भने यो निकै खतरनाक सावित पनि हुनसक्छ ।
लामो समय काम गर्दा ल्यापटप धेरै तात्न नपाओस् । यसका लागि हरेक दुई तीन दिनमा सफा र नरम कपडाले राम्रोसँग सफा गर्नुहोस् ।
यसको साटो ल्यापटप क्लिनर ब्रसबाट समेत ल्यापटपको फोहोर हटाउन सक्नुहुन्छ । यस बाहेक ल्यापटपको स्मुथ फंसनिङका लागि त्यसमा रहेका अनावश्यक तथा अतिरीक्त एप्लिकेसन अनइन्स्टल गरिदिनुहोस् ।
ल्यापटपको मेमोरी फुल हुँदा ल्यापटप तात्ने मात्र होइन प्रोसेसरमा भार पर्न गई स्लो हुने समस्या समेत पैदा हुने गर्दछ ।
कतिपय समय ल्यापटपको ब्याट्रीका कारणले पनि ल्यापटप तातिरहेको हुन्छ । यदि ल्यापटपको ब्याट्रीले राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन भने चार्जमा लामो समयसम्म राख्ने गरिन्छ अथवा भनौं हरपल ल्यापटप चार्जमा लगाएरै चलाउनुपर्ने हुन्छ ।
लामो समय चार्ज गर्दा ब्याट्री तात्न पुग्छ र त्यसले ल्यापटपमा ओभर हिट उत्पन्न गराउँछ । यस्तोमा ल्यापटपको ब्याट्री खराब भएको छ भने त्यसलाई परिवर्तन गर्न कञ्जुस्याई नगर्नुहोस् ।
अफिसमा हुनुहुन्छ भने त ल्यापटप सधैं डेक्स वा कम्प्युटर टेबलमै रहने गर्दछ । तर आजकल मानिसहरु घरबाट काम गरिरहेका छन् ।
यस्तोमा हामी कतिपय समय त्यसलाई काखमा राखेर चलाइरहेका हुन्छौं । तर यसरी ल्यापटप प्रयोग गर्नु गलत तरिका हो ।
प्रायजसो ल्यापटपले कुलिङका लागि तलपट्टीबाट हावा लिने गर्दछन् । काखमा राखेर लामो समयसम्म ल्यापटप प्रयोग गर्दा कुलिङ फ्यानमा राम्रोसँग हावा ओहोर दोहोर गर्न पाउँदैन ।
त्यसैले लामो समयसम्म काम गर्नुछ भने ल्यापटपलाई सही स्थानमा राख्नुहोस् ता कि त्यसको एयर भेन्टिलेसन सही रहन सकोस् र सीपीयूको फ्यानलाई आवश्यकमात्रामा हावा प्राप्त हुन सकोस् ।
ल्यापटपमा कुलिङ फ्यान हुने गर्दछ । ल्यापटप प्रयोग गरिरहँदा यो फ्यान राम्रोसँग चल्न आवश्यक छ ।
तर कुलिङ फ्यान प्रयोग गर्दै जाँदा धूलो माटोबाट फोहोर हुन थाल्दछ र राम्रोसँग चल्न सकिरहेको हुँदैन । जसले गर्दा त्यसले ल्यापटपमा आवश्यक मात्रामा कुलिङको काम गर्न सकिरहेको हुँदैन ।
त्यसैले ल्यापटपमा ओभर हिट पैदा हुन नदिन कुलिङ फ्यानलाई समय समयमा सफा गर्नुहोस् । यदि कुलिङ फ्यानले राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन भने त्यसलाई मर्मत सम्भार गर्नुहोस् ।
यदि दिन रात ल्यापटपलाई अन राख्नुहुन्छ भने ल्यापटप धेरै नै तात्ने गर्दछ । दिउँसोको समयमा काम गरिसकेपछि ल्यापटपलाई आराम दिन नबिर्सिनुहोस् ।
यदि केही लामो ब्रेक लिइरहनु भएको छ भने त्यसलाई स्लिप मोडमा राखिदिनुहोस् । सुत्ने समयमा ल्यापटपलाई शट डाउन गर्ने बानी बसाल्नुहोस् ।
१९ मंसिर २०७७, शुक्रबार ०३:२३